Ukubhaliswa kwe-Pan-African University online kwabafundi abathola iziqu - I-Afrikhepri Fondation
isonto, 18 Ephreli, 2021
Funda: 5 amaminithi
IPan African University (noma iPan African University) (PAU) wuqeqesho lokuthweswa iziqu kanye noxhaxha lwezindawo zokucwaninga zaseyunivesithi ezifundeni ezinhlanu, zisekelwa yi-African Union. Le nhlangano entsha iphinde yesekwe yi-Association of African Universities.
I-PAU ihlose ukuhlinzeka ngethuba lokuqeqeshwa kwabafundi abaneziqu kanye nocwaningo lweziqu kubafundi base-Afrika abenza kahle kakhulu. Izinhloso zibandakanya ukukhuthazwa kokuhamba kwabafundi kanye nothisha nezinhlelo zokuvumelanisa kanye neziqu
Ngokusho kombiko kusukela UNESCO Institute for Izibalo (UIS), umfundi Afrika ku 16 noma 5,6% share cwaningo phesheya. Yini eyenza bona, abafundi abahamba phambili kunazo zonke emhlabeni, cishe izikhathi ezintathu ngaphezu kwesilinganiso sezwe. Ngokuyinhloko kusukela e-Afrika eseNingizimu-Sahara, laba bafundi bavame ukukhetha iNtshonalanga Yurophu njengendawo yabo yokuqala, ikakhulukazi eFrance (21%), e-United Kingdom (12%) futhi, kancane kancane, eFrance. I-Germany (6%) ne-Portugal (5%).
Ucwaningo lwe-CNRS ngezizathu zokuhamba kwabafundi kwamanye amazwe lisekela lokhu okutholayo. Lokhu kubonisa phakathi kwezizathu ezikhungethwe abafundi base-Afrika, ikakhulukazi imibono yomsebenzi (63.5%) nokuntuleka kwemfundo yaseyunivesithi (35.6%).
Njengokuthi ukubhekana nalokhu okukhathazayo, i-African Union ngokusebenzisa uMongameli weKhomishana uJean Ping wamisa ngokusemthethweni i-Pan African University enhlokodolobha i-Addis Ababa e-Ethiopia.
Lo mcimbi global emthaleni ka uWanda Abafundi, sasisihlanganyela eside okuhloswe ukudala lonke Afrika kwi izikhungo isandla omunye ubuhle ukuqhuba ucwaningo ezindabeni exhumene ezwekazini futhi ngakolunye uhlangothi ukuqeqesha ochwepheshe bezinga eliphakeme abazokwazi ukuletha konke ubuchwepheshe babo ekuxazululeni izinselele ezenziwa ngentuthuko e-Afrika. Izikhungo zobuhle ezicatshangelwayo, phakathi kwamanye, amandla, i-Environment, Innovation, Governance, Technology, Space Sciences, Water ... njll.
Izinhloso wokuvelela kakhulu lePan African University (PAU) kuyofezwa ngokusebenzisa izindawo ezinhlanu, ngayinye onguchwepheshe yindawo yokusebenza esemqoka nokuba core zezifundo nezokuphatha (sikhungo lesifunda) eyabelwe ibutho inyuvesi ekhona, abalingani inyuvesi kanye namanethiwekhi ezemfundo nabafundi.
Ukuhlukaniswa kwesifunda, ngemuva kwenqubo eyinkimbinkimbi futhi enzima esathatha ama-6 ans (!), Ingabe okulandelayo:
- E-Afrika Ephakathi, iNyuvesi yaseYaounde II eCameroon iye yakhethwa ukuba ihambele iSifunda se-Humanities, i-Social Sciences kanye nokuBusa okuhle.
- EMpumalanga Afrika, iJomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, I-Kenya izoba endaweni yeSayensi Yesiyisisekelo, Ubuchwepheshe Ne-Innovation.
- ENtshonalanga Afrika, iYunivesithi yase-Ibadan eNigeria izobe iphethe i-Life and Earth Sciences.
- ENyakatho Afrika, ukukhetha kwagcina kwawa kwi-Institute of Water, Energy and Climate Change ka-Annaba e-Algeria.
- ENingizimu ye-Afrika, iNingizimu Afrika, ngenxa yobuningi bezakhiwo, inikezwe umthwalo weSpace Science.
I-Panafrican University izophathwa yizitho ezintathu eziyinhloko ezi:
- UMkhandlu we-UPA,
- I-Rectory kanye
- iBhodi labaHhovisi.
Umkhandlu we-University of Panafrican yilungu elibusayo le-Institution nemisebenzi yalo. Futhi njengoba kuhlinzekwe kumatheksthi, amalungu omkhandlu azobandakanya abameleli abathintekayo abakhulu ababandakanya izifundiswa, abaholi bomphakathi, abamele imiphakathi yezomnotho yesifunda, kanye nemikhakha kanye nemboni yangasese.
I-Association of Universities African (AUA) kanye ne-Academy of Sciences nayo iyoba nendima enkulu ekusebenzeni komkhandlu weYunivesithi onesibopho sokuqinisekisa ukuhlonishwa kombono we-African Union, okuyimfuneko yokugqwesa. ikhwalithi, ukubaluleka kwezinhlelo kanye nenqubomgomo ye-Institution.
I-rectorate izoba yimbutho ephezulu ye-UPA. Uyoba necala lokuhlela, ukuqapha nokuxhumanisa izikhungo kanye nezikhungo. Luzobe liholwa nguMongameli uMqondisi ozoqondisa ukuxhumana nokubambisana kwangaphakathi nangaphandle kweYunivesithi. Ngakho-ke, kunesibopho sokubika njalo enkomfeni yezikhonzi zezemfundo, ngokusebenzisa ikhomishini ye-African Union.
Ngokuqondene neBhodi labaqondisi, unomthwalo wemfanelo oyinhloko kuzo zonke izifundo ze-University. Kuzofaka phakathi, phakathi kwabanye, abameli bama-rectors noma abaqondisi bamaziko kanye nezikhungo, abameleli bezikhungo ezisemqoka kanye nabafundi. IBhodi labaPhathimandla lizohlangana ngesimemo soMongameli weRector of UPA. Nguyena ozogcina futhi emihlanganweni yakhe. Futhi izisebenzi zesikhungo zizobe zakhiwa othisha nabasebenzi abahlala njalo ezivela emazweni ahlangene, othisha abahlinzekwa yizizwe zeLungu, othisha kanye nabasebenzi bokuphatha okwesikhashana okuhlinzekwe ngamazwe abambelele, nabasebenzi othisha besikhashana nabothisha abavakashele abavela emazweni angamalungu, abahlali kanye nabalingani
Kubalulekile ukugcizelela ukuthi iziqu ezinikezwa yunivesithi zizobanjelwa ngokuhlanganyela nezikhungo ezihambele ezindaweni ezihlukahlukene futhi zizobonakala kulo lonke elase-Afrika.
Abafakizicelo abasebasha, abaqeqeshiwe, abanamakhono futhi abanesibindi abavela emazweni ase-Afrika naseDiaspora bayamenywa ukuthi bafake izicelo zokujoyina amakhosi noma izinhlelo zokufunda zobudokotela kwesinye sezikhungo ezine ze-PAU ezibalwe ngezansi. Abafakizicelo abanamandla aphezulu, inkuthazo nesifiso sokudlala indima yokuhola eguqukayo lapho izifundiswa, ochwepheshe, osomabhizinisi, abaqambi kanye nosomabhizinisi bakhuthazwa ikakhulukazi ukuthi basebenzise.